को हुन् रबि लामिछानेको फोटोमा रि*प लेखेर फेसबुकका ग्रुपमा राख्ने यी युवा ? हेरौं र जानौं – PanchKhal Online
Home/समाचार/को हुन् रबि लामिछानेको फोटोमा रि*प लेखेर फेसबुकका ग्रुपमा राख्ने यी युवा ? हेरौं र जानौं
को हुन् रबि लामिछानेको फोटोमा रि*प लेखेर फेसबुकका ग्रुपमा राख्ने यी युवा ? हेरौं र जानौं
अहिले गएको बिहिबार देखि सोशल मिडिया र चितवन जिल्लासहित देशका धेरै जसो ठाउँ पत्रकार रबि लामिछानेको समाचारले भोरिएका छन् । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आ८त्मह८त्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रवि लामिछानेसहित युवराज कँडेल र ओखलढुङ्गाकी अस्मिता कार्कीलाई प*क्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । रबि लामिछाने न्युज २४ टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका सञ्चालक हुन् भने कँडेल सोही कार्यक्रममा कार्यरत थिए । उनीहरुलाई साँझ टेलिभिजनको कार्यालयबाट र कार्कीलाई काठमाडौँको कलङ्कीबाट अपराह्न प*क्राउ गरिएको थियो ।
आ८त्मह८त्या गर्नुअघि पत्रकार पुडासैनीले उनीहरुको नाम लिएर आफूलाई यो अवस्थामा पुर्याउन बाध्य बनाएको भन्दै रेकर्ड गरिएको भिडियो फेला परेको थियो । बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोका आधारमा अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई प*क्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
देशभरी रविको समर्थन गर्नेहरुले प्रदर्शन गरी रहेका छन् भने धेरै रविको विरोधमा पनि छन् । सबैलाई आआफ्नो विचार राख्ने अधिकार पनि छ तर एक जना युवाले त् रविको फोटोमा रि*प भनेर नै फेसबुकको एक ग्रुपमा राखेका छन् र उक्त फोटो राखेको एकै घण्टामा फोटो सर्वत्र भाइरल भएको छ भने उक्त युवालाई रबिका समर्थकहरुले सक्दो गा*लि गरेका छन् ।
नेकपामा सुरु भयो बबण्डर, प्रभु साहले दिए प्रदेश २ को अध्यक्षबाट राजिनामा